Faallada Afgembiyadii ka Dhacay Turkiga - Worldnews.com
Faallada Afgembiyadii ka Dhacay Turkiga
Turkiga waxaa laga xusay sannadguuradii ka soo wareegtay markii dalkaas uu ka dhacay afgembigii fashilmay. Haddaba maxay ku kala duwan yihiin Inqilaabkaas fashilmay sannad ka hor ee ka dhacay dalka Turkiga iyo afgembiyadii hore ee guulaystay ee Milaterigu xukunka kula wareegay. ...
​Turkiga oo soo gaba-gabeeyay Dhismaha Saldhigiisa Muqdishu
MUQDISHU, Somalia- Turkiga ayaa saldhig Milatari oo weyn ka dhisanaya caasumadda Somalia ee magaalada Muqdishu, kasoo dhismihiisu muddo ka socday halkaas islamarkaana la...
Gareowe Online 2017-07-15
Theresa May oo madaxweyne Erdogan kula kulmeysa Turkiga
Ra'iisul wasaaraha dalka Britain, Theresa May ayaa Sabtida booqan doonta dalka Turkiga. Waxay halkaas wadahadal kula yeelan doontaa madaxweyne Recep Tayyip Erdogan, sida...
BBC News 2017-01-25
Turkiga: Maxkamad xabsi daa'in ku xukuntay 104 qof
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa xabsi daa'in ku xukuntay 104 qof oo horey uga tirsanaa ciidamada dalkaasi. Waxaa dadkani lagu soo oogay dacwad ku saabsan in ay qayb...
BBC News 2018-05-21
Maxkamadeynta dad loo haysto afgembigii fashilmay oo maanta Turkiga ka bilaabaneysa
Waddanka Turkiga waxaa maanta ka billaabanaysa maxkamadeyn muhiim ah oo la xiriirta afgembigii fashilmay ee dalkaasi ka dhacay sanad kahor, iyadoo maxkamad la soo taagayo...
Turkiga oo 13 kun oo askeri shaqada ka tiray
Dowladda Turkiga ayaa shaqada ka joojisay 13 kun oo boolis oo lagu eedeeyay inay xiriir la leeyihiin wadaadka fadhigiisu yahay Mareykanka, Fetxullah Gulen. In kabadan 2500...
BBC News 2017-01-04
Baarlamaanka Turkiga ayaa maanta billaabaya dood ku saabsan qorshe lagu doonayo in isbadal lagu sameeyo dastuurka dalkaas si awoodo dheeraad ah loo siiyo madaxwaynaha....
Baarlamaanka Turkiga ayaa maanta billaabaya dood ku saabsan qorshe lagu doonayo in isbadal lagu sameeyo dastuurka dalkaas si awoodo dheeraad ah loo siiyo madaxwaynaha. Madaxwayne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in awood heer sare ah ay Turkiga la simi doonto dalalka Faransiiska iyo Maraykanka. Dadka...
Muxuu salka ku hayaa safarka Farmaajo ee Turkiga?
MUQDISHU, Somalia - Madaxweynaha Somalia Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo Wafdi uu hogaaminayo ayaa maanta oo Talaado ah u ambabaxay dalka Turkiga, kadib markii uu casuumaad ka helay Erdogan. Wasiiro uu kamid yahay midka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar iyo Xildhibaano ayaa ku wehliya Madaxweyne Farmaajo Booqashadiisa dalka Turkiga oo qaadan doonto 3 maalmood. Madaxaweynaha...
Baarlamaanka Turkiga oo kordhiyay waqtiga Xaaladda degdegga
Baarlamaanka dalka Turkiga wuxuu u codeeyay in la kordhiyo xaaladda degdegga ah ee dalkaasi uu ku jiro. Wuxuu baarlamaanka ogolaaday in seddax bilood laga badiyo amarka degdegga ah oo la soo rogay ka dib afgembigii fashilmay ee bishii July, 2016. Hadda wuxuu sii socondoonaa illaa bartamaha bisha April ee sanadkan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka, Numan...
Lix astaamood oo lagu garto afgembiyada
Militariga dalka Zimbabwe ayaa xabsi guri geliyay madaxweyne Robert Mugabe, waxayna la wareegeen telefishinka qaranka iyo awoodda dalka. Ciidamada iyo gawaaridooda ayaa ku sugan jidadka Harare halkaas oo rasaas iyo qaraxyo laga maqlay Arbacadii. Ma inqilaab baa? Militariga waxay ku adkeysanayaan in uusan afgembi ahayn, balse waxaa jiro calaamado badan oo muujinaya. Calaamadaha...
Turkiga oo shaqada ka eryay 7,000 oo qof sanad ka dib afgembigii dhicisoobay
Turkiga ayaa soo saaray wareegto uu shaqada kaga ceyriyay kumanaan Iyadoo maanta ay ku beegan tahay sanad guuradii koowaad ee iskudaygii afgembigii ee dhicisoobay. In ka badan todobo kun oo isugu jira saraakiil booliis, xubno dowladda ka tirsan iyo aqoonyahanno ayaa wareegtadasi shaqada looga eryay. Turkiga ayaa hore shaqada uga eryay in ka badan boqol iyo konton kun oo...